Dhaamsa Waggaa Haaraa HD-GS-ABO -
Ummata Oromoo Kabajamaa, Waraana Bilisummaa Oromoo, Miseensota ABO biyya keessaa fi alaa, akkasumas, ummatoota Cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jirtan maraaf, baga waggaa haaraya 2016 geessan jechaa, waggaan haaraan kunis kan bilisummaa fi nagaa itti argannu hunda keenyaaf akka nuuf tahu hawwii qabun ibsa.
Kanneen haqa ummata isaanii kabajsiisuuf jecha gaaffii mirgaa kaasuu isaanii qofaaf, barataa, hojjataa fi qotee-bulaa Oromoo magaalaa fi baadiyyaa irraa mana hidhaa suukanneessaa keessatti dhamaafamaa jiran hundaaf ABOn kabajaa qabuuf ibsachaa onnee Oromootaa hunda keessatti guyyuu kan yaadataman tahuu beeksisa.
Waggaan haaraan wayta seenu kan fuula duraa karoorfatuuf kan dabre ilaallatuun waan barame tahuu irraa, haala siyaasaa biyyattii, haala dinagdee fi hawaasummaa irratti dhugaa mul’ataa fi qabatamaa jiru wal yaadachiisuun barbaachisaa taha. Gareeleen seenaa dabre hin kaasiinaa, irraanfadhaa jechuun miidhaan ummata keenya irra gahe dhokatee akka hafu barbaadan akka jiran beekamaa dha. Haa tahu malee, kan dabre kaasan malee kan keessa jiran hubatuu fi fuula dura ofii beekuun ulfaataa waan tahuuf qaphxiilee garii kaasuun dirqii taha.
Hundeen rakkoo ummatoota Itophiyaa, rakkoo siyaasaa dhuma jaarraa 19ffaa irraa eegalee gangalataa dhufe tahuu haaluun hin danda’amu. Sirni jaarraa kana irraa jalqabee Itophiyaa irratti diriirfame, sabaa fi sab-lammoota biyyattii kan biyya isaanii weeraree qabatuun mirga isaanii ol aanaa sarbe, moggeessee fi sabummaan xiqqeesse, cunqursaa siyaasaa fi saamicha dinagdee kan tarkaanfachiisu tahuu irraa biyyattii nagaa fi tasgabbii dhorkate. Mirgi eenyummaa sarbamee, dhimma biyyaa fi matayyaa irratti murteessaa tahuu hanqatuu, mirga-dhablummaan ajajamaa tahanii jiraatuuf dirqamuun hundee rakkoo siyaasaa Itophiyaa ti. Haa tahu malee, ummatootni Itophiyaa sirnoota humnaan irratti of irroomsuun isaan bitaa turanii fi jiran kanneeniif yeroon itti jilbeenfatanii bulan akka hin turre irra deebiin yaadachisuu baraabaachisa. Yeroo adda addaatti bakkoota gara garaatti qabsoo hadhaawaa gochaa diddaa isaanii agarsiisaa turan.
2 thoughts on “Dhaamsa Waggaa Haaraa HD-GS-ABO”
Odaa Bareentoo says:
Well articulated case for Oromian independence and sovereignty. Our hope, dream, political savior and economic emancipation go forward OLF..OLF is the symbol of Oromoo pride, dignity and patriotism that Ethiopian/Wayyaanee’s tank and fighters jets could not crash. It is a sold organization with glorious and unshakable history whose ultimate goal is raising the flag of Oromian independence on Ethiopian/Wayyaanee’s colonial flag. We are determined and resolute to continue our unflinching support for our beloved freedom fighter the OLF.
Gumaa Sabaa says:
DHUGA DHUBACHUUN FIROMMA HIN KUTTU JEDHANI MAMMAAKU.
dubbachuuf qonqoon nu duudde dhiisuuf gara nu guute jedhani makmaaku.
dubbi kiyya jalqabuuf . ummata tokko Jira isaan gosuma takka gaafa tokko akka hama wololani mangudduma isaani tan isaan irra fagaatte jiraatu araaraf yaamani.
mangudichi erga dubbi dubate booda waan jedhe bar jara keen Waaqni isin abaare jiraa jedheen ummataan. achuma manguddoon tokko ka’ee ati hoo jedheen ee anis akkkuma keessan abaaramee jedheen jedhama. kana wonni jedheef atu nama jetta teeti maalgodhu jirta worra jedhu deebi’i ta’a jedheeti kana jedhe.
kana jechu ykn gaafachu barbaadu waaye . worra ABO,WBO,KWB.kana mata nyaate . sila jarri kuni maaluma ima sirban erga lubbu woreeguu bayani . isaani qawwe takka dhukaasu hin argine ee garu internet irrati dhukaasa jiru dhiifama. maaf maqa ummata bal’atiin daldalu? ka har’a nuuf hin lubbu isaanitiin nu bira hin dhabanne yoo qawwe qabati asuma sirbuun. keessatuu hoggantoonni. maqa hayyama adda adda baafatni kan galmi isaani tokko asi ima dutuu akka saree binneessa argite. ykn maqa keessan jijira ABO,WBO.KWB. HIN jiru jedha ummata hima ykn hayyama lafa kaaya.ani akka nama biyya keessa jiru tokkotti ammaan tana jechu kiyya.dubbiin bara kana yoo qawwee argatin furmaata argattu. jarrii qaween dhufani waan ta’ee qawwe male hin bayan sana beeka. ammo ummta isin jaalatu ofi harka hin baasina qara salphattani lama salphatina. ani kan isini baressu nama gaafa isin biyya keessa dhuftani baatan dhalte.. garu isin worri nuti hongantoota ABO,WOB KWB ,ODF. ofiin jedhu meeti ree amma . kijibdoota . interneti worra isaatiif dhiisa ibsa kijba gnama galgala dhukaastan dhiisa gala lola. dubbiin har’a ka worra ginboot7 deema Jira worra isini asi ka’e . adeera kiyya tokko gaafa isin jijirma jettani labsitani san gaafadhe . adeero jedheen bar amma jijirma dhufa Jira abo jabaatte jedhe. muca kiyya naan jedhani namni yo salphatu akkana naan jedhan. maal jedhu isaaniti oromoon lama ta’uun bakka lamatti bayuun. har’a ammo gaafa sabni dammaqe mana isatitti isaan dhoysu dand’u ibsa kijiba nu baasn internet irratti. ABO eennu ni jaalata kan lubbu jiru miti kan gana dhalatus abo dha. garu worra abo qancharse abo maqa balesse kayo inni ijaarameef dhiisi mana dhuunfa isa ijaarate. worra sani mee ammaf maqa isaani hin dhayu garu guyyaan nu dhufa. dhifama wojji kijiba keessan dhiisa qawwe dhukasa .